သင်၏ငါးပြတိုက်ကိုသန့်ရှင်းစေရန်အကောင်းဆုံး siphons ငါးများ
ငါးပြတိုက် siphon သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးပြတိုက်ထိန်းသိမ်းမှုကိုဆောင်ရွက်ရန်အခြေခံကျသောအခြားကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် ထို့ကြောင့်၎င်းကိုသန့်ရှင်းအောင်ထားပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးများပျော်ရွှင်ကျန်းမာ။ siphoner ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ခြေ၌စုထားသောအညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားပြီးငါးပြတိုက်အတွင်းရှိရေကိုသက်တမ်းတိုးရန်၎င်းအားအခွင့်ကောင်းယူလိမ့်မည်။
ဤဆောင်းပါး၌အဘယ်အရာကိုငါတို့ပြောလိမ့်မယ် siphoner ဆိုတာဘာလဲ၊ ငါတို့တွေ့နိုင်တဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့အမျိုးအစားတွေ၊ ငါးပြတိုက်တစ်ခုကိုဘယ်လိုစုပ်မလဲ ပြီးတော့မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်လုပ် siphon ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတာသင်ပေးမယ်။ ထို့အပြင်ဤအကြောင်းကိုအခြားဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည် ငါးမွေးကန်များတွင်အသုံးပြုရန်ရေ ဒါကမင်းပထမဆုံးအကြိမ် siphoning ဖြစ်ခဲ့ရင်
1 ငါးပြတိုက် siphon ဆိုတာဘာလဲ
2 ငါးပြတိုက်ကို siphoning သုံးခြင်းကဘာလဲ။
3 ငါးပြတိုက်အတွက် siphoner အမျိုးအစားများ
4 ငါးမွေးကန်ထဲမှာ siphon ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ
5 စိုက်ထားသောငါးပြတိုက်ကို siphon ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
6 ငါးပြတိုက် siphon ကိုဘယ်မှာ ၀ ယ်ရမလဲ
ငါးပြတိုက် siphon ဆိုတာဘာလဲ
Siphon Aquarium၊ သန့်ရှင်းရေး...
siphon ဟုလည်းလူသိများသောငါးပြတိုက် siphoner သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးပြတိုက်အောက်ခြေကိုရွှေဂျက်လေယာဉ်များအဖြစ်မှထွက်ခွာရန်အလွန်အသုံးဝင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အောက်ခြေရှိကျောက်စရစ်တွင်စုထားသောအညစ်အကြေးများကိုစုပ်ယူသည်.
siphoners (ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများ) အနည်းငယ်ရှိသော်လည်း (နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးကြမည်)၊ ၎င်းတို့အားလုံးသည်အကြမ်းအားဖြင့်တူညီသည်၊ ၎င်းတို့သည်ရေကိုမျိုချသောဖုန်စုပ်စက်တစ်မျိုးနှင့်တူသည်စုဆောင်းထားသောအညစ်အကြေးများနှင့်အတူသီးခြားကွန်တိန်နာတစ်ခုတွင်ထားရန်။ အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ညစ်ညမ်းသောရေကိုသီးခြားကွန်တိန်နာတစ်လုံးနှင့်ဆွဲငင်အားကြောင့် siphon မှတဆင့်စုပ်ယူနိုင်သောကိရိယာတစ်ခုကြောင့်စုပ်ယူအားကိုလျှပ်စစ်သို့မဟုတ်လက်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
ငါးပြတိုက်ကို siphoning သုံးခြင်းကဘာလဲ။
ကောင်းပြီ၊ ငါးပြတိုက်တစ်ခုအားစုပ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်သည်အခြားမဟုတ်ပါ ၎င်းကိုသန့်ရှင်းပါ၊ ငါးမွေးကန်၏အောက်ခြေတွင်စုပြုံနေသောအစာနှင့်ငါးမစင်ကိုဖယ်ရှားပါမရ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေပြန်ဖွင့်ပါ၊ siphon သည်ကျွန်ုပ်တို့အားလည်းခွင့်ပြုသည်။
အခွင့်ကောင်းယူသည် ငါးပြတိုက်ရေကိုပြောင်းပါ (ညစ်ပတ်သောအရာအားသန့်ရှင်းသောအရာဖြင့်အစားထိုးပါ)
အစိမ်းရောင်ရေကိုရှောင်ပါ (ရေညှိသည် siphon ကိုနှိမ်နင်းရန်တာဝန်ရှိသည်။
ငါးပြတိုက်အတွက် siphoner အမျိုးအစားများ
အဲဒီမှာ ငါးပြတိုက်အတွက် siphoner အမျိုးအစားနှစ်မျိုး၊ လျှပ်စစ်နှင့်လက်စွဲဤအရာများအတွင်း၌သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သောအလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောလက္ခဏာအချို့ရှိသော်လည်း၊
သေးငယ်သော siphons များ ၎င်းတို့သည်သေးငယ်သည့်ငါးပြတိုက်များအတွက်စံပြဖြစ်သည်မရ။ လျှပ်စစ်ဓာတ်ရှိသော်လည်းသေးငယ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးခေါင်းလောင်း (သို့) မာကျောသောပြွန်တစ်မျိုးပါ ၀ င်သည်၊ ညစ်ပတ်သောရေထဲသို့ပျော့ပျောင်းသောပြွန်တစ်ခုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့နောက်သို့အနှိပ် (ခလုတ်) သို့မဟုတ်ခလုတ်တစ်ခုပါ ၀ င်စေနိုင်သည်။ ရေကိုစုပ်ရန်
NICREW3in 1 ဖုန်စုပ်စက် ...
သံသယကင်းစွာဖြင့်အထိရောက်ဆုံး၊ အသေးစား siphoners ကဲ့သို့တူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည် (ရေထဲသို့ ၀ င်လာသောတောင့်တင်းသောပါးစပ်၊ ၎င်းမှတဆင့်ခရီးသွားသောနူးညံ့သောပြွန်နှင့်စုပ်ရန်ခလုတ်၊ မော်တာသေးသေးလေးတို့ပါရှိသော်လည်း) သူတို့ကပိုအားသာသည်။ အချို့မှာသေနတ်ပုံစံ (သို့) ဖုန်များသိုလှောင်ရန်လေဟာနယ်အမျိုးအစားအိတ်များပါ ၀ င်သည်။ ဤ siphons များ၏ကောင်းကျိုးမှာ၎င်းတို့သည်လက်စွဲစာအုပ်များထက်အနည်းငယ်ပိုစျေးကြီးသော်လည်း၎င်းတို့သည်ငါးပြတိုက်၏ဝေးလံခေါင်သီသောနေရာများသို့ကျွန်ုပ်တို့ကို ၀ င်ရောက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
နောက်ဆုံးတွင်လျှပ်စစ် siphons များအတွင်း၌၎င်းတို့ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အပြည့် (၎င်းတို့အားလက်ရှိသို့ပလပ်ထိုးထားသည်) သို့မဟုတ်ဘက်ထရီများ.
bdee6in 1 သန့်စင်ဆေးရည် ...
အခြားစတိုးဆိုင်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သောငါးပြွန် siphon အမျိုးအစားမှာတစ်ခုဖြစ်သည် အညစ်အကြေးကိုစုပ်သော်လည်းရေမဟုတ်မရ။ ကိရိယာသည်ကျန်တာနှင့်အတိအကျတူညီသည်၊ ၎င်းတွင်အမှိုက်များကိုအိတ် (သို့) တင့်ကားအတွင်းသိုလှောင်ရန်ဖြတ်သန်းသောခြားနားချက်ရှိသော်လည်းငါးကိုသန့်စင်ပြီးသားရေကိုငါးပြတိုက်ထဲသို့ပြန်လည်ထည့်သွင်းသည်။ siphon ၏ကျေးဇူးသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျောက်တုံးကြီးတစ်တုံးဖြင့်ငှက်နှစ်ကောင်ကိုသတ်။ ငါးပြတိုက်၏အောက်ခြေကိုသန့်ရှင်းစေပြီးရေကိုအလွယ်တကူပြောင်းလဲစေသောကြောင့်ရေရှည်တွင်ဤအရာသည်အလွန်အကြံပြုထားသောပုံစံတစ်ခုမဟုတ်ပါ။
မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်လုပ် siphon ပြုလုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ချေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ဒီမှာမင်းကိုပြမယ် စျေးသက်သာပြီးပိုရိုးရှင်းသောမော်ဒယ်မရ။ သင်ပြွန်တစ်ခုနှင့်ပလပ်စတစ်ဘူးတစ်ဘူးသာလိုအပ်လိမ့်မည်။
ပထမ ဦး စွာ siphon ပါ ၀ င်သောအရာများကိုရယူပါ။ ပွင့်လင်းပြွန်အပိုင်းအစအလွန်ထူ။ မတောင့်တင်းပါ။ မည်သည့် hardware စတိုးဆိုင်ကဲ့သို့မဆိုအထူးစတိုးဆိုင်များတွင်ရနိုင်သည်။ သင်တစ် ဦး လည်းလိုအပ်လိမ့်မည် ရေဘူး (သို့) ဆိုဒါသေးသေးလေး (၂၅၀ မီလီလီတာလောက်ကောင်းပါတယ်)
သားဥပြွန်ကိုဖြတ်ပါ တိုင်းတာရန်။ ဒါဟာအရမ်းရှည်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အရမ်းတိုစရာမလိုပါဘူး။ ၎င်းကိုတိုင်းတာရန်၊ ငါးမွေးကန်၏အောက်ခြေအမြင့်တွင်ညစ်ပတ်သောရေပုံးတစ်ပုံးကိုထားရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။ ထို့နောက်ပြွန်ကိုငါးပြတိုက်ထဲသို့ထည့်ပါ။ ပြီးပြည့်စုံသောအတိုင်းအတာမှာသင်ငါးပြတိုက်၏ကြမ်းပြင်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးပြသနာမရှိပုံးသို့ရောက်အောင်၎င်းကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။
ပုလင်းကိုဖြတ်ပါ။ ငါးပြတိုက်၏အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုပိုမြင့်။ ပိုနိမ့်နိုင်သည်။
ယူ ပုလင်းအဖုံးကိုဖောက်ပါ ဒါကြောင့်မင်းကပလပ်စတစ်ပြွန်ကိုထည့်လို့ရပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာအဲဒါကိုတွဲထားတုန်းဘဲ။ ဦး ထုပ်၏ပလပ်စတစ်သည်ကျန်ထက်ပိုမာကျောပြီးထိုးဖောက်ရန်ခက်ခဲသောကြောင့်၎င်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အရှုပ်ထွေးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်သည်။
အဖုံးမှတဆင့်ပြွန်ကိုထည့်ပါ ပုလင်းကိုဆွဲရန်၎င်းကိုသုံးပါ။ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။
အလုပ်ဖြစ်အောင်၊ siphon ပုလင်း၏အစိတ်အပိုင်းကိုငါးပြတိုက်၏အောက်ခြေ၌ထားပါမရ။ ပူဖောင်းအားလုံးကိုဖယ်ရှားပါ။ ညစ်ပတ်နေတဲ့ရေကိုသွားဖို့အတွက်ရေပုံးကိုအဆင်သင့်ထားပါ။ ထို့နောက်ဆွဲငင်အားသည်ရေကိုပုံးထဲသို့ကျစေသည်အထိပြွန်၏အဆုံးစွန်ကိုစုပ်ပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်သုံးတဲ့ siphon ကိုသုံးပါ။ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်နေစဉ်ငါးပြတိုက်မှရေ၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုမဖယ်ရှားမိရန်အလွန်သတိထားပါမင်းရဲ့ငါးတွေကဖျားနိုင်တယ်။
ငါးမွေးကန်ထဲမှာ siphon ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ
ပထမ ဦး စွာသင်လိုအပ်မည့်ကိရိယာများကိုပြင်ဆင်ပါ။ siphoner သည် ၎င်းသည်၎င်းလိုအပ်သောပုံစံတစ်ခုဖြစ်လျှင်၊aရေပုံးသို့မဟုတ်ပန်းကန်မရ။ ၎င်းကိုဆွဲငင်အားအတွက်၎င်း၏ငါးဖမ်းရန်ငါးပြတိုက်ထက်အနိမ့်အမြင့်တွင်ထားရှိရပါမည်။
အောက်ခြေကိုအလွန်ဂရုတစိုက်လစ်လျှူရှုပါ။ အညစ်အကြေးအများဆုံးစုထားသောနေရာကိုစတင်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်သင်ကျောက်စရစ်ကိုမြေပေါ်သို့မလွှင့်ပစ်ပါနှင့်၊ မည်သည့်အရာကိုမဆိုတူးပါ၊ သို့မဟုတ်ပါကသင်၏ငါး၏နေရင်းဒေသကိုထိခိုက်နိုင်သည်။
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုဘဲအရေးကြီးတယ်၊ ဥပဒေကြမ်းထက်ရေပိုမယူပါနှင့်မရ။ ပိုမြင့်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းကမင်းရဲ့ငါးတွေကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်အများဆုံး ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ သင် siphoning ပြီးသည်နှင့်သင်ညစ်ပတ်နေသောရေကိုသန့်ရှင်းသောရေဖြင့်အစားထိုးရပါမည်၊ သို့သော်၎င်းကိုငါးမွေးကန်၌ထားခဲ့သောတူညီသောအပူချိန်နှင့်တူညီရမည်ကိုသတိပြုပါ။
နောက်ဆုံးတော့မင်းရဲ့ငါးပြတိုက်အရွယ်အစားပေါ်အများကြီးမူတည်လိမ့်မယ်၊ siphoning လုပ်ငန်းစဉ်အားအခါအားလျော်စွာဆောင်ရွက်ရမည်မရ။ အနည်းဆုံးတစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်နှင့်လိုအပ်လျှင်တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်အထိ
စိုက်ထားသောငါးပြတိုက်ကို siphon ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
စိုက်ထားသောငါးပြတိုက်များသည် aquarium siphon အသုံးပြုမှုအတွက်သီးခြားအပိုင်းနှင့်ထိုက်တန်သည် သူတို့သည်အလွန်သိမ်မွေ့သည်မရ။ မင်းရဲ့ငါးတွေနေတဲ့နေရာကိုမယူမိဖို့အတွက်ငါတို့ကအောက်ပါတို့ကိုအကြံပြုတယ်။
a ရွေးပါ လျှပ်စစ် siphoner, ဒါပေမယ့်အနည်းငယ်သာပါဝါသေးငယ်တဲ့ဝင်ပေါက်တစ်ခုနဲ့ပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်မင်းအရမ်းပင်ပန်းလွန်းရင်ဖုန်စုပ်ပြီးငါတို့ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကိုရှောင်ရှားချင်တဲ့အပင်တွေကိုတူးနိုင်တယ်။
သင်နို့စို့သောအခါအလွန်သတိထားပါ အမြစ်ကိုမတူးပါနှင့် သို့မဟုတ်အပင်များကိုထိခိုက်စေသည်။ မင်းမှာပိုသေးတဲ့အပေါက်တစ်ခုပါတဲ့ siphon ရှိရင်ငါတို့ဒီအဆင့်ကိုကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးတော့ siphon ကိုသုံးရန်အနူးညံ့ဆုံးအပင်များသည်မြေပြင်ကိုညှိပေးသည်မရ။ သူတို့ကိုအရမ်းမတူးမိအောင်အရမ်းညင်ညင်သာသာလုပ်ပါ။
ငါးပြတိုက် siphon ကိုဘယ်မှာ ၀ ယ်ရမလဲ
အဲဒီမှာ siphoner ကိုသင် ၀ ယ်နိုင်သည်ဟုတ်တယ်၊ သူတို့ကအထူးပြုလေ့ရှိတယ် (မင်းရဲ့မြို့ရဲ့ကုန်ခြောက်ဆိုင်မှာသူတို့ကိုတွေ့ဖို့မမျှော်လင့်ပါနဲ့) ။ အသုံးအများဆုံးများမှာ -
အမေဇုံစတိုးဆိုင်များ၏ဘုရင်သည်လုံးဝဖြစ်ခဲ့ဖူးသောပုံစံများအားလုံးရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်ရိုးရှင်းမှု၊ လက်စွဲစာအုပ်၊ လျှပ်စစ်၊ ဘက်ထရီသုံး၊ ပို။ အင်အားနည်းသည်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည်ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်အပြင်၊ သင်၏လိုအပ်ချက်များကို အခြေခံ၍ သင့်လိုအပ်ချက်များကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုမှတ်ချက်ပေးရန်အကြံပြုသည်။ အခြားသူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံ
En အထူးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အရောင်းဆိုင်များKiwoko ကဲ့သို့မော်ဒယ်အချို့ကိုလည်းသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သူတို့မှာ Amazon လောက်အများကြီးမတူပေမဲ့တစ်ချို့ကိစ္စတွေမှာနည်းနည်းပိုဈေးကြီးနိုင်ပေမဲ့ဒီစတိုးဆိုင်တွေအကြောင်းကောင်းတာကမင်းလူကိုယ်တိုင်သွားနိုင်ပြီးကျွမ်းကျင်သူအတွက်အကြံဥာဏ်တောင်းနိုင်တယ်၊ အထူးသဖြင့်သင်စတင်ခဲ့တုန်းကအထူးအကြံပြုထားတဲ့အရာတစ်ခုဘဲ။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာငါးကမ္ဘာ
ငါးပြတိုက် siphon သည်ငါးပြတိုက်ကိုသန့်ရှင်းစေပြီးသင်၏ငါးများပြန်လည်ကျန်းမာလာစေရန်နှင့်ပိုမိုပျော်ရွှင်စေသည်။ မင်းဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာမင်းနားလည်ဖို့ကူညီပေးပြီးငါတို့နဲ့အသင့်တော်ဆုံးငါးမွေးကန်နဲ့အဆင်ပြေဆုံး siphon ကိုရွေးချယ်ဖို့မင်းပိုလွယ်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်။ ငါတို့ကိုပြောပါ၊ ဒီ tool ကိုသုံးဖူးလား။ ဘယ်လိုလဲ။ မော်ဒယ်တခုခုကိုသင်ထောက်ခံပါသလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါး၏ » ပစ္စည်းများ » ငါးပြတိုက် siphoner